आइपीएलः हैदाराबाद र राजस्थान भिड्दै आज, को–कोले पाउलान् मौका? - Everest Dainik - News from Nepal
आइपीएलः हैदाराबाद र राजस्थान भिड्दै आज, को–कोले पाउलान् मौका?
काठमाडौं, चैत १६ । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) अन्तर्गत आज गत वर्षको उपविजेता सनराइजर्स हैदाराबाद र राजस्थान रोयल्स खेल्दै छन् । यी दुई टिमबीचको खेल साँझ ८ः१५ बजे हैदाराबादमा हुँदैछ । पहिलो खेलमा पराजित भएका यी दुवै टिमको लक्ष्य हुनेछ जित निकाल्ने ।
याे पनि पढ्नुस गेल र रसेल फेल हुँदा पनि वेस्ट इडिन्जले दियो विशाल लक्ष्य
हैदराबाद पहिलो खेलमा कोलकातासँग र राजस्थान पन्जावसँग पराजित भएको थियो । पहिलो खेलमा पराजय बेहोरेका यी दुई टिममा आज खेलाडी परिर्वतन देख्न सकिने छ । आजको खेलमा को—कोले पाउन सक्छन् मौका?
राजस्थान सम्भावित टिमः आजिंक्य रहाणे (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सञ्जू स्यामसन, स्टीव स्मिथ राहुल त्रिपाठी, बेन स्टोक्स, स्टुअर्ट बिन्नी, इश सोधी, जयदेव उनादकट, श्रेयस गोपाल र धवल कुलकर्णी
याे पनि पढ्नुस चौथो खेलमा अष्ट्रेलिया ६ रनले विजयी, काम लागेन अलि र रिजवानको शतक
हैदराबाद समभावित टिमः केन विलियम्सन (कप्तान), भुवनेश्वर कुमार, मनीष पाण्डे, डेविड वार्नर, यूसुफ पठान, शाकिब अल हसन, विजय शंकर, खलील अहमद, राशिद खान, दिपक हुडा र ऋद्धिमान साहा
ट्याग्स: Cricket, IPL, Rajasthan Royals Vs Sunrisers Hyderabad